Iindlela ezi-3 zokuThathwa kwiiNdawo ezi-5 kuThengiso lwe-imeyile oluKhethekileyo | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 2, 2012 NgoMgqibelo, Oktobha 25, 2014 Itempile yaseLavon
Ngokutsho Uphando lweSherpa Benchmark 2012, Iinkampani ezininzi zinokuthi zonyuse uhlahlo-lwabiwo mali lwe-imeyile ngaphezulu kwe-30% ngo-2012. Nangona kunjalo, iDelivra ifumanisa ukuba uninzi lweenkampani zisasokola neendlela ezifanayo ezisisiseko ze-imeyile-uluhlu lwezakhiwo, umxholo, ukudityaniswa, uyilo, njl.
Sukonyusa uhlahlo-lwabiwo mali lwakho lwe-imeyile ngaphandle kokugxila ngokucacileyo kwinto ekufuneka iphuculwe nakwintoni na. Thatha ixesha lokujonga kwizinto ezisisiseko; zezi ngcamango zisisiseko ezenza ukuba inkqubo yakho yokuthengisa nge-imeyile ibalasele. Kutshanje, iDelivra ipapashe iindlela, amanani kunye neengcebiso. Apha ngezantsi kukho ii-3 zokuthabatha:
Yenza umxholo osekwe kwidatha. Ukwenza umxholo ofanelekileyo kunokuba ngumceli mngeni kubathengisi be-imeyile. Qokelela idatha rhoqo malunga nabaphulaphuli bakho ukuze wenze umxholo ube kufanelekile kangangoko kunokwenzeka. Fumanisa ukuba abaphulaphuli bakho bafuna ukukuva ntoni ngokubuza kuvavanyo okanye kwiziko lokhetho.
Ukwahlulahlula kukunika umda kukhuphiswano. Kwi I-MarketingSherpa 2012 yoPapasho lweNtengiso yeBenchmark, Yatsho ukuba iipesenti ezingama-95 zeenkampani zifuna ukuphucula uluhlu lwamacandelo. Sukushiyeka ngasemva-qala ugxile ekwenzeni ulwahlulo lwakho ngoku!
Uyilo lweselfowuni, ixesha. Ngokwengxelo efanayo, i-58% yabathengisi be-imeyile abayili ii-imeyile ukuba zinikezele ngokufanelekileyo kwii-smartphones. Ii-Smartphones ziya zithandwa ngakumbi, kutheni ungazoyila ii-imeyile ngale nto engqondweni?
tags: UkuThengiswa kweMpahlaIinkcukachadelivraemail MarketingUkuthengisaSherpaUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiisahluloiintsingiselo